ဆွေသဟာကြောင့် အင်တာနက်လိုင်းတွေ ပိုကောင်းလာတယ် လို့ ပြောတဲ့ မေ – DigitalTimes
ဆွေသဟာကြောင့် အင်တာနက်လိုင်းတွေ ပိုကောင်းလာတယ် လို့ ပြောတဲ့ မေ
မကြာမှီ ရက်ပိုင်းမှာ တစ်ကိုယ်တော်ခွေ ထွက်ရှိတော့မယ့် သရုပ်ဆောင် မေ နဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မေရဲ့တစ်ကိုယ်တော်ခွေကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၃)ရက်နေ့မှာထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မေနဲ့တွေ့တုန်း သူမရဲ့အနုပညာအကြောင်းနဲ့ ဖုန်းအကြောင်းလေးကိုမေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Q. လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကို ပြောပြပေးပါလား။
၂၃ရက်နေ့ညီမရဲ့တစ်ကိုယ်တော်ခွေထွက်ဖို့အတွက် အလုပ်တွေနည်းနည်းရှုပ်နေတယ်။ ကားရိုက်ကကိုပြေတီနဲ့ရိုက်ပြီး ၁၂လပိုင်းထဲက ကားရိုက်နားထားပါတယ်။
Q. သီချင်းဘယ်နှပုဒ်လောက်ပါလဲ။တေးရေးတွေကရော ဘယ်သူတွေပါလဲ။
သီချင်းအားလုံးပေါင်း (၁၂)ပုဒ်ပါတယ်။ တေးရေးတွေက ကိုဇဝါ၊ ရေမွန်၊ အောင်လ၊ ညီမင်းခိုင်၊ စည်သူမင်း၊ နေကြည်ထွန်းထွန်း တို့ရေးပေးထားတယ်။
Q. အခွေ Title လေးကိုဘယ်လိုပေးထားလဲ။
Marry Me လိုပေးထားပါတယ်။ Marry Me သီချင်းက ကိုရွှေဂျော်ဂျော် ရေးပေးထားတာပါ။
Q. သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ကနေ အခွေထုတ်တာဆိုတော့ အခွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောရှိလား။
စိတ်ကတော့ နည်းနည်းတော့ ပူတယ်။ အခွေ စထုတ်ဖို့လုပ်ကတည်းက မြတ်ဖို့ကို မတွေးထားဘူး။ ရှုံးမယ်လို့ ကြိုတွက်ပြီးသား ဒီမှာကProduction တွေကို အားကိုးလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် နယ်ရှိုးတွေ လိုက်ဆိုတဲ့အခါ ကိုယ့် မူပိုင်သီချင်းရှိတော့အဆင်ပြေတယ်။ အဓိကကတော့ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်လုပ်တတ်တဲ့အရာ တစ်ခုကို လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကျတော့ ကိုယ်ကိုလာငှား တဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကိုပဲ လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ အဆိုပိုင်းကျတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို ပရိတ်သတ်ကို ချပြခွင့် ရတယ်။
Q.အခွေ promotion ရောလုပ်ဖို့ရှိလား။
ဟုတ်၊ လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာပဲလုပ်ဖြစ်မယ်။ Promotion ပွဲကို (၂၅) ရက်နေ့မှာလှည်းတန်း Center Outdoor မှာ ညနေ(၄)နာရီကနေ (၇)နာရီအထိရှိမှာပါ။ အခြား အနုပညာရှင်တွေလည်း ဖိတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ လာတဲ့သူတွေကို Lucky Draw လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ ညီမအကြောင်းလေးတွေ သူတို့ကိုမေးပြီး လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးသွားမှာပါ။ မန္တလေးမှာတော့ Fun meeting လေးလောက်ပဲ လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ ညီမအခွေ ဝယ်ထားတဲ့ သူတိုင်း အခွေပြပြီး Fun meeting ကို တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Q. အခုနောက်ပိုင်း Internet တွေအသုံးများလာတော့ သီချင်းDownlode လုပ်တာတွေရှိတယ်။ ကိုယ်သီချင်းကို အခွေမဝယ်ပဲ Internet နေ Down မှာကိုရော စိုးရိမ်မိလား။
ညီမကတော့လေ ခွေထုတ်ဖို့လုပ်ကတည်း အရှုံးဆိုတာ တွက်ပြီးသားပဲ။ အဲဒါကြောင့်သိပ်တော့ စိတ်မပူဘူး။ ရောင်းအားထက် ညီမသီချင်းတွေပေါက်တယ်။ လူကြိုက်များတယ်ဆို ကျေနပ်ပါတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ များလာတာကို ညီမကကြိုက်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေအတွက်တော့ ကောင်းပါတယ်။ ကောင်းတာရှိသလို မကောင်းတာလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း ကိုယ်ပေါ် မူတည်ပါတယ်။ မီဒီယာတွေ များတော့ ကိုယ်သတင်းများများပါတာပေါ့။
Q. အခုကိုင်ထားတဲ့ဖုန်းလေး ကိုပြောပြပေးပါလား။
Iphone7ကိုင်ထားပါတယ်။
Q. iphone ပဲ ကိုင်ဖြစ်တာလား။ Andriod ဘာလို့မကိုင်တာလဲ။
Android လည်းကိုင်ဖူးတယ်။ ညီမအတွက် သုံးရတာသိပ်အဆင်မပြေဘူး။ iphone ကိုင်နေကြမို့လို့လား မသိဘူး။ Android က ညီမအတွက်နည်းနည်းရှုပ်တယ်။ iphone က စထွက်ကတည်းက ကိုင်တာဆိုတော့ သုံးနေကျဖြစ်တော့ အဆင်ပြေတယ်။ ညီမက ဖုန်းသုံးရင် ဖုန်းပြောမယ်၊ Facebook သုံးမယ်၊ Message ပို့မယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် ဒီလောက်ပဲသုံးဖြစ်တယ်။ ကျန်တာ သိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး။ ဖုန်းထဲမှာလည်း အခြား APP တွေမရှိဘူး။
Q. အင်တာနက်ရော တစ်နေ့မှာ ဘယ်လို သုံးဖြစ်လဲ။ လိုင်းအခြေအနေလည်း ပြောပြပေးပါလား။
အင်တာနက်ကို တစ်နေ့လုံးဖွင့်ထားတယ်။ မသုံးပဲ ဖွင့်ထားတာလည်းရှိတယ်။ သုံးရင်လည်း Instagram သုံးတယ်၊ Facebook သုံးတယ်၊ Google ကြည့်တယ် ဒီလောက်ပါပဲ။ လိုင်းဆွဲအားက အရင်ထက်တော့တော့ ကောင်းလာပါတယ်။ ဆွေသဟာကြောင့်လား မသိဘူး။ ညီမက MPT ပဲသုံးတာပါ။ အရင်ကထက်သုံးရတာ တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်။
MWC 2017 မှာ Oppo က ဘယ်လို နည်းပညာတွေ ပြသမလဲ
မေလ မှာ ရှောင်မီ Mi-Max2ထွက်မည် ဟု ကုမ္ပဏီ က ဆို